Dariiqooyinka Xasuusta |
Abshiro Axmed Cabdi — April 17, 2019
« Ka fikir labo waxyaabood oo aan isku mid ahayn oo isku xiran. Tusaalle ahaan xusuuso roog iyo daaqada iskuna day in aad hesho
Marka uu qof arko qof waddada marayo oo uusan diirada saarin qofkaas muuqaalkiis, aragtidaas ayaa waxaa lagu kaydiyaa xasuusta dareenka ah. Waan sabbabta keentay in uu qofku tilmaami waayo dhamman waxuu waddada ku soo arkay.
xiriirka ka dhexeeya labadan shay. arrintani waxa ay ku siinaysaa awoodda aad ku falanqeyn karto fikradaha maskaxdada Ku jira.
« Iska ilaali kafayga hal koob oo kafay ah ayaa wuxuu kaa dhigayaa inaad dareentid walwal iyo walaac wuxuuna ka hortagayaa nuugista vitamiin gaar u ah shaqada maskaxda. Vitamin kaasoo kaa dhigi lahaa inaad marwalba dareentid feejignaanta iyo garashada maskaxda.
« Iska yaree isticmaalka telefanka gacanta ama ha isticmaalin haddii loo baahdo maxaa yeelay telefoonku waxuu sahlayaa in qofku uu ka mashquulo dhamman wax yaabihi looga baahanaa. Marka haduusan wax muhiim ah ku haysan in uu iska dhaafo ayaa haboon.
« Isku day inaad fahamto waxa aad akhrinayso, sabbabta oo ah waxa ay maskaxda ka dhigayaan mid wax badan kaydiso.
« Calalinta Xanjada: Cunista xanjada waxay hagaajin kartaa awoodda iyo xusuusta sida daraasaddaha Ingiriiska iyo cilmi baarista ayaa muujisay. xanjada ayaa kor u qaadi karto garaaca wadnaha, Oxygen iyo glucose waxayna ku xidhan tahay xasuusta maskaxda.
« Cunto yar: qaadashadda cunto yar ayaa leh sameyna balaran ee maskaxdu ku heli karto xasuus wannaagsan iyo tamar ku fillan. Cunida qadar badan ayaa dhiiga u rogi karta qalad. tani waxay kaa dhigi kartaa inaad dareento firfircooni la’aan.
« Dhagaysiga Qur’aanka: Tani waa mida ugu fudud oo qofka muslimka ah ka dhigi karta in uu hello xasuus wannagsan. Sidoo kale waa mida ugu dhakhsaha badan oo kaa dhigaysa inaad dareentid awooddaada iyo xalinta dhibaatooyinka si fudud ilaa 95%.
« Qor qiso: Isku day inaad xusuusato qaar ka mid ah magacyada iyo ereyada. Kadibna qor sheekoyinka khiyaaliga ah ee maskaxdaada Ku soo dhacda. isla markaana u qoondee magacyada iyo ereyada si habboon una qor sheeko la fahmi karo
Tags: Dariiqooyinka Xasuusta
Next post Nabaad Guurka Dhirta “xaalufka dhirta”
Previous post Nuucayada Xasuusta iyo Cuntooyinka Xoojiya Xusuusta